Mino Raiola Oo Magacaabay LABA Kooxood Oo Erling Haaland ‘Aanu Diidi Karin’ Xagaagan - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaMino Raiola Oo Magacaabay LABA Kooxood Oo Erling Haaland ‘Aanu Diidi Karin’ Xagaagan
Mino Raiola Oo Magacaabay LABA Kooxood Oo Erling Haaland ‘Aanu Diidi Karin’ Xagaagan
May 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Wakiilka caanka ah ee Mino Raiola ayaa magacaabay laba kooxood oo weeraryahanka Borussia Dortmund ee Erling Haaland aanu diidi karin xagaagan, haddii ay dalabyo kasoo gudbiyaan.
Mino Raiola waxa uu tilmaamay in Manchester City ay tahay kooxda ugu suurtogalsan ee uu Erling Haaland u wareegi karayo marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaaga foodda innagu soo haya.
Laacibka reer Norway oo lagu tilmaamo dhaliyaha ugu wanaagsan ee jiilka da’yarta ee waqtigan, isal markaana dunida kaga yaabsaday goolal cajiib ah oo sida daadka uu ugu dhaliyay kooxaha Borussia Dortmund oo uu kusoo biiray bishii January ee sannadkii hore iyo RB Leipzig.
Maadaama Borussia Dortmund ay ku dhibaatoonayso in ay ka mid noqoto afarta kooxood ee ugu sarreeya horyaalka Jarmalka ee Bundesliga, suurtogalna ay tahay in ay ka maqnaato Champions League xilli ciyaareedka dambe, Raiola ayaa tibaaxay in Haaland uu doonayo in uu ka ciyaaro Champions League.
Waxa kale uu Mino Raiola shaaciyey magacyada labada kooxood ee ku weyn qalbiga laacibkan, kuwaas oo haddii uu dalabyo ka helo aanu diidi karaynin.
Real Madrid iyo Barcelona oo dhowaan Mino Raiola iyo aabbaha dhalay Erling Haaland ee Alf Inge Haaland ay dhowaan lasoo kulmeen, kalana hadleen sidii ay u iibsan lahaayeen 20 jirkan, ayuu Mino Raiola sheegay in ay yihiin kuwa uu 20 jirkani u arko in ay ku habboon yihiin ee aanu dalabkooda diidi doonin.
Mino Raiola oo waraysi siinayay wargeyska AS ee kasoo baxa Spain, ayaa yidhi: “Maanta, go’aanka Dortmund waa in ay sii haysato Haaland, laakiin anigu waxaan qabaa aragti kale, waxaanay ila tahay, in haddii ay yimaaddaan fursad, qof kastaana uu ku farxi karo, in aanu miiska iskugu iman doono.
“Haaland wuxuu xiiseeyaa laba arrimood. Goolal dhalinta, sababtoo ah wuxuu xoogaa la mid yahay Cristaino ama Zlatan… tan ayaa uu u hammuun qabaa, waana arrin wanaagsan. Iyo in uu horyaallo ku guuleysto. Shaki kuma jiro in uu dooran doono meel uu labadan arrimoodba ka helayo oo isaga u wanaagsan.
“Dhab ahaantii way adag tahay in been la sheego. Marka koox sida Barcelona ama Real Madrid oo taariiko badan leh ay ku hor yimaaddaan way adag tahay in la diido.”
Intaas kaddib ayuu soo qaaday kooxo kale oo isku dayaya in ay la saxeexdaan Haaland, waxaanu yidhi: “PSG ayaa soo gelaysa kooxaha waaweyn, City ayaa isku dayaysa, Juve ayaa mar horeba ku jirta. Horyaalka ay ka ciyaaraan ayaa sidoo kael muhiim ah. PSG waxay ka ciyaartaa horyaalka ugu xun ee naadi weyni ka dheelo. Bayern ayaa joogta horyaal soo jiidasho leh, laakiin waxaynu ognahay in mar walba ay ku guuleysanayso. Spain waxa jira saddex kooxood oo fursad u haysta in ay guuleystaan.
“Ma garanayo in Real Madrid ay ka gayoonayso (in ay iibsan karayso Haaland), sababtoo ah, anigu ma daraasaynin buugaagtooda, laakiin waxay ila tahay in ay karayaan. Waxay ila tahay in dhamaantood ay karayaan.”